lundi, 05 avril 2021 20:02
Ambohibao Antehiroka : Tovovavy sakaizam-bazaha, niharan’ny fanolanana nihatra aman’aina
Fanairana avy amina olona tsara sitrapo no nanokafan’ny zandary fanadihadiana avy hatrany. Nisy vazaha teratany frantsay, niantso an’ity olon-tsotra ity mba hanampy azy hibata sy hanary faty any Toamasina ny 3 aprily 2021.
Nampiahiahy ilay olona izany antso izany, ka nampandre ny zandary avy hatrany izy.
Tonga teny Ambohibao - Antehiroka Distrika Ambohodratrimo misy ny toeram-ponenan’ilay vazaha ireo mpanao fanadihadiana. Nisokasokatra ny varavarana. Nilaza ilay vazaha fa misy faty ao an-tranony.
Niroso tamin’ny fisavana trano, araka ny fanomezan-dalana avy amin’ny Fitsarana ny zandary.
Efitrano fatoriana nikorontana, misy dian-drà, ary nahitana “fusil à pompe” miaraka amin’ny bala maromaro no hitan’izy ireo.
Ampampamena Ambanja : Voasambotra ireo dimy lahy nandroba sady nandratra mpivarotra enta-madinika
Notafihin’ny andian-jiolahy mitam-piadiana ny mpivarotra enta-madinika iray tao Antanamazava, Fokontany Ampampamena, Kaominina Maherivaratra, Distrika Ambanja ny harivan’ny 3 aprily 2021.
Naratra teo amin’ny lohany nandritra izany ny lehilahy tompon-trano tokony ho 57 taona. Lasan’ireo jiolahy ny lelavola 1 200 000 Ariary sy entam-barotra maromaro.
Roso tamin’ny fikarohana ireo olon-dratsy avy hatrany ny zandary avy ao amin’ny Poste fixe Maherivaratra vao nahazo fampandrenesana, niaraka tamin’ny Fokonolona.
Voasambotra ny tovolahy iray, 21 taona, iray tamin’ireo nanao fanafihana. Nahatratrarana fonosana sigara niisa 36 sy mena-bolo niisa 6, ary koa kiraro tany aminy, izay isan’ireo entana halatra avokoa. Ilehio indray no nanoro ireo namany, ka dia nisy efatra hafa voasambotra, 18 ka hatramin’ny 37 taona izy ireo.
Atao famotorana izy ireo ankehitriny, ary dia hatolotra ny Fampavoavana aorian’izay.
lundi, 05 avril 2021 19:45
Bekofafa - Ihosy : Dahalo iray maty voatifitra
Notafihin’ny andian-dahalo mitam-basy ny tanan’i Beraketa Fokontany Bekofafa, Kaominina Mahasoa, Distrika Ihosy ny harivan’ny 1 aprily 2021. Omby miisa 34 an’ny mpiompy iray tao an-tanàna no nokedren’ireo dahalo ireo.
Nanohitra ny Kalony sy ny « Quartier Mobile ». Tonga avy hatrany ihany koa ny zandary avy amin’ny brigady Mahasoa vao nahazo fampandrenesana.
Dahalo iray maty tao anaty fifandonana, vaky nandositra ireo namany. Karohina ireto farany, fa fantatry ny Fokonolona ny anaran’ny roa amin’izy ireo.
Tafaverina amin’ny tompony avokoa ireo omby ; tsy nisy naratra ny mpanaradia.
lundi, 05 avril 2021 19:39
Ampasamanatongotra- Miarinarivo : Fiara Peugeot 305 niharan-doza tao anaty ora-mikija
Fiara kely Peugeot 305 iray no niharan-doza tao Ampasamanatongotra PK 99 amin’ny lalam-pirenena voalohany, Kaominina Miarinarivo II, Distrika Miarinarivo ny harivan’ny alahadin’ny Paka 4 aprily 2021 takariva raha hiazo an’Ampefy.
Nanoram-baratra ny andro, ka tsy voafehin’ny mpamily ny fiara vokatry ny fandehanana mafy, ary dia nivoaka ny lalana ny fiara ka nivadika.
Tsy nisy aina nafoy na koa naratra, fa tombanana eo amin’ny 70% ny fahasimban’ny fiara.
lundi, 05 avril 2021 19:35
Covid-19 : Olona 2 lavo tao anatin’ny 24ora tao SAVA
Lehilahy iray, 80 taona, no lavon’ny Covid-19 ny 02 aprily 2021. Notsaboina tao amin’ny CHRD Ambondrona Antalaha izy nanomboka ny 27 martsa 2021. Ny 1 aprily 2021 no voamarina tamin’ny fitiliana natao azy fa voan’ny Covid-19. Nodimandry ny 02 aprily 2021 izy.
Namono olona telo tao amin’ny Distrika Antalaha ny Covid-19 hatramin’ny nidiran’io valanaretina teto Madagasikara, ary ity no faharoa lavo hatramin’ny fiandohan’ity taona 2021 ity.
Tao Sambava indray dia lehilahy iray, 54 taona, mpiasan’ny Hôpitaly SALFA, no nodimandry ny 2 aprily 2021 andro nivalin’ny fitiliana natao azy milaza fa voan’ny Covid-19 izy. Notsaboina tao amin’ny CHRR Besopaka Sambava ity lehilahy ity.
Nalevina ny andron’io ihany tao amin’ny Fasam-bahiny ao Menagisa Kaominina Sambava ny faty. Olona 07 avy amin’ny fianakaviany no nanatanteraka izany, teo ambany fanaraha-mason’ny mpitandro ny filaminana.
Enina aminy no lavon’ity valanaretina Covid-19 tao anatin’ny Distrikan’i Sambava hatramin’ny nidirany teto Madagasikara, ary faharoa hatramin’ny fiandohan’ity taona 2021 ity.
lundi, 05 avril 2021 19:30
Covid-19 : 5 namoy ny ainy, 268 tranga misy fahasarotana
Toy izao ny antontan'isa maneho ny fivoaran’ny Covid-19 eto Madagasikara ny 04 aprily 2021
Tranga vaovao 137 tamin'ireo 382 nanaovana fitiliana :
Atsimo Andrefana 7
Nandritra ny fivahinianan’i Andriatsima Faneva Ima tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina Real TV, taorian’ny lalao farany nataon’ny Barea an’i Madagasikara nanoloana an’ny Mena avy any Niger, no nampahafantarany ny hoaviny sy ny vinavinany aorian’ny hitsaharany tsy hilalao eny ambony kianja intsony.
Nambaran’i Andriatsima Faneva Ima fa hiverina eto Madagasikara izy, ary faniriany ny hanana sy hitantana klioba kitra iray.
Nambarany fa nanamarika azy ny hoe : teratany Renioney no nahita ka nandefa azy hilalao baolina tany Frantsa, fa tsy Malagasy. Faniriako, hoy i Faneva Imà mba izaho no handefa mpilalao hila ravinahitra any ampitan-dranomasina.
36 taona i Faneva Imà Andriatsima ankehitriny. Kapitenin’ny Barea izy teo aloha. 14 ny baolina tafidiny nandritra ny naha mpilalaon’ny ekipam-pirenena azy. Nanamarika azy ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika taona 2019. Niato tsy nilalao ao amin’ny Barea izy taorian’ny lalao fifanintsanana CAN 2021 teo Mahamasina tamin’ny 2019 ka nandresen’i Madagasikara 1 noho 0 an’i Ethiopie.
Nantsoin’ny mpanazatra Nicolas Dupuis izy, ary nanaiky niatrika ireo lalao roa farany tao amin’ny Vondrona K nisy an’i Madagasikara, tamin’ny fifanintsanana CAN 2021. Tsy nandingana ny vondrona ny Barea.
lundi, 05 avril 2021 19:12
Alatsinainin’ny Paka : Nangadihady ny plazy tao Nosy Be
Nangina tsy nahitana mpitsangatsangana ny ankamaroan’ny tora-pasika ao Nosy Be ity Alatsinainin’ny Paka 2021 ity, toy ny tao Ambatoloaka, Madirokely, Dzamandzar, Andilana, Ampasindava, Befotaka ary Amporaha.
Mikatona tsy afa-mifandray amin’ireo Distrika manodidina i Nosy-Be noho ny valanaretina Covid-19. Nohalavaina 15 andro io fepetra io ho fiarovana ny fahasalamam-bahoaka.
Manara-maso akaiky ny fampiharana izany ny mpitandro ny filaminana tarihin’ny prefen’i Nosy-Be.
lundi, 05 avril 2021 19:07
Manompana- Soanierana Ivongo : Mpandraharahan’ny fonja nifaoka ka nahafaty zaza tamin’ny moto
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona tao Anove, amin’ny lalam-pirenena faha-5, Kaominina Manompana, Distrika Soanierana Ivongo ny tolakandron’ny 3 aprily 2021 lasa teo.
Zazalahy kely, 3 taona, no voafaokan’ny moto nentina mpandraharahan’ny fonja iray miasa any Mananara Avaratra teo ampiampitàna ny arabe.
Naratra mafy ilay zaza, ary nentina haingana tao amin’ny CSBII Anove. Tsy tana ny aina na natao aza ny vonjy aina.
Tonga tao an-toerana ny zandary nijery ny zava-misy.
Nentina nankao Soanierana Ivongo ilay mpandraharahan’ny fonja nisorohana ny fitsaram-bahoaka.
Efa nalain’ny havany ny faty. Nosokafana ny famotorana noho ny loza niteraka faty olona.
lundi, 05 avril 2021 19:06
Ankoronga - Toliara : Kamiao iray nahatratrarana hazo voarara
Kamiao iray, nitondra karazan-kazo "Jambihy" izay ho voatsokajy ho hazo voararan'ny lalàna ny fanondranana azy no saron’ny zandary avy amin’ny BPR Toliara, tao Ankoronga PK 917, RN9 ny tolakandron’ny 03 aprily 2021.
Vehivavy no tompon’ny hazo. Sady tsy manana fahazoan-dalana hitrandraka hazo no tsy manana fahazoan-dalana hitahiry hazo ary tsy manana fahazoan-dalana ahafahana mitondra ireo hazo izy.
Nogiazina ambalam-pamonjana fiara avy hatrany ilay kamiao sy ireo hazo. Natazomina koa ny mpamily sy ny mpanampy ny mpamily ary ilay ramatoa tompon’ny hazo.
Misokatra ny fanadihadihana miaraka amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Fitaleavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Atsimo Andrefana.